सिंहदरवार बगैँचा ! « प्रशासन
सिंहदरवार बगैँचा !
प्रकाशित मिति : 22 June, 2020 9:27 am
काठमाडौँ । चिटिक्क मिलाएर रोपिएको हरियो बिरुवा, ठाउँ ठाउँमा फरफराई रहेको चन्द्र सूर्य अंकित नेपाली राष्ट्रिय झन्डा । रंगिबिरङगी फूल, मण्डलाको मध्य स्थलमा नेपालको नक्सा र झन्डा । मण्डलाको वरिपरि गोलाकार रूपमा सेना झैँ लामबद्ध लहरै हरियाली रुख, मानौँ हरित गृहजस्तै भित्री भाग । सात रङ्ग मिलेर इन्द्र धनुष बने झैँ सातै प्रदेश सातथरि फुलबाट बनेको सुन्दर माला ।
सात प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तयार पारिएको फक्रिएको कमलको फूल । यो कुनै चलचित्रको छायाङ्कनका लागि तयार गरिएको दृश्य होइन, कमलको फूल आकारमा मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार परिसरलाई नयाँ परिकल्पना ढाल्न खोजिँदै गरेको प्रारूप हो यो ।
प्राकृतिक संरचनाको फेवरमायसको मौलिकतालाई कायम राख्दै बाहिरी प्रदक्षिणा पथका साथै भित्री प्रदक्षिणा पथ पनि मण्डलाकारमा रूपमा निर्माण गरिँदै छ । यो परिसरलाई विभिन्न कलाकृर्तिका साथै हरियाली बनाउने योजना सरकारले बनाएको छ । जसरी गुरुत्वाकर्षण बलकाकारण सूर्यमा अन्य ग्रहहरू आकर्षित छन् र ब्रह्माण्डको सिर्जना भएको छ । त्यसरी नै देशको प्रमुख शक्ति केन्द्र सिंहदरवारलाई बुटिकका रूपमा सजाउने प्रारूप तयार सरकारले तयार पारेको छ । देशभरिका समस्या तथा समृद्धि यही आएर ठोकिन्छ अनि समाधानका उपाय पनि यसैले खोज्छ । देशमा सयौँ नेता तथा राष्ट्रसेवक जन्माउने यो थलोलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने योजनामा छ सरकार ।
कुनै बेला थोत्रा गाडी र झाडीले भरिने सिंहदरवार परिसर अब सुन्दर, शान्त र रङ्गीचङ्गी बन्दै छ । पुरानो गाडीको व्यवस्थापनसँगै नयाँ साजसज्जाबाट सिंहदरवारको रूप फेर्न सरकार लागि परेको छ । संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व यसमा रहने छ । ब्रह्म स्थानमा राष्ट्र र राष्ट्रियता अर्थात् नेपालको नक्सा र झन्डा राखेर नव सजावटमा सिंहदरवार सिँगारिएपछि बुटिक प्रशासनिक केन्द्र बन्ने छ ।
सिंहदरवारस्थित गृह मन्त्रालयको पछाडिको खाली ठाउँमा बगैँचा बनाउने अवधारणा अघि सारिएको हो ।
Tags : सिंहदरवार बगैँचा